Ny fiavian'ilay mpampianatra demonia - vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Ny razamben'ny mpampianatra demonia Average 4.1 / 5 avy amin'ny 9
N / A, manana fomba fijery 53.5K
Vakiana ianao Ny razamben'ny mpampianatra demonia mahafinaritra manhwa.
Ny fiainana voalohany. Taorian'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina namoy ny fianakaviany sy ny tongony dia namarana ny ainy izy. Ny fiainana faharoa. Nahazo laza izy amin'ny maha-mpampianatra demonia mena ao Zhongyuan azy nefa namadika azy ilay lehilahy natokisany indrindra. Ary tonga amin'ny fiainany fahatelo izao. Tamin'ny fiainany tamin'ny andro maoderina dia nanapa-kevitra ny hiaina fiainana ara-dalàna i Gang Jinho… Na izany aza, efa zatra loatra tamin'ny fiainana Zhongyuan izy ka lasa olon-tsotra! 'Te hiaina am-pilaminana aho. Fa ianareo no nanomboka azy. Manantena aho fa vonona ho amin'izany ianao. ' Manoloana ny fandrahonana amin'ny fiainam-baovao, azon'i Gang Jinho esorina ve ny fihetseham-pony amin'ny maha-mpampianatra demonia mena azy ary hahazo ny 'fiainana ara-dalàna' tadiaviny? Ny tantara fampifanarahana an'ny artista haiady malaza tamin'ny taonjato faha-21!
Chapter 137 Enga anie 13, 2022
Chapter 136 Enga anie 13, 2022
Chapter 135 Aprily 29, 2022
Chapter 134 Aprily 29, 2022
Chapter 133 Aprily 14, 2022
Chapter 132 Aprily 8, 2022
Chapter 131 Aprily 8, 2022
Chapter 100 Enga anie 24, 2021
Chapter 99 Enga anie 18, 2021
Chapter 98 Enga anie 18, 2021
Chapter 97 Enga anie 2, 2021
Chapter 96 Enga anie 2, 2021
Chapter 95 Enga anie 2, 2021
Chapter 94 Enga anie 2, 2021
Chapter 93 Enga anie 2, 2021
Chapter 92 Enga anie 2, 2021
Chapter 91 Enga anie 2, 2021
Chapter 90 Enga anie 2, 2021
Chapter 89 Enga anie 2, 2021
Chapter 88 Enga anie 2, 2021
Chapter 87 Enga anie 2, 2021
Chapter 86 Enga anie 2, 2021
Chapter 85 Enga anie 2, 2021
Chapter 84 Enga anie 2, 2021
Chapter 83 Enga anie 2, 2021
Chapter 82 Enga anie 2, 2021
Chapter 81 Enga anie 2, 2021
Chapter 80 Enga anie 2, 2021
Chapter 79 Enga anie 2, 2021
Chapter 78 Enga anie 2, 2021
Chapter 77 Enga anie 2, 2021
Chapter 76 Enga anie 2, 2021
Chapter 75 Enga anie 2, 2021
Chapter 74 Enga anie 2, 2021
Chapter 73 Enga anie 2, 2021
Chapter 72 Enga anie 2, 2021
Chapter 71 Enga anie 2, 2021
Chapter 70 Enga anie 2, 2021
Chapter 69 Enga anie 2, 2021
Chapter 68 Enga anie 2, 2021
Chapter 67 Enga anie 2, 2021
Chapter 66 Enga anie 2, 2021
Chapter 65 Enga anie 2, 2021
Chapter 64 Enga anie 2, 2021
Chapter 63 Enga anie 2, 2021
Chapter 62 Enga anie 2, 2021
Chapter 61 Enga anie 2, 2021
Chapter 60 Enga anie 2, 2021
Chapter 59 Enga anie 2, 2021
Chapter 58 Enga anie 2, 2021
Chapter 57 Enga anie 2, 2021
Chapter 56 Enga anie 2, 2021
Chapter 55 Enga anie 2, 2021
Chapter 54 Enga anie 2, 2021
Chapter 53 Enga anie 2, 2021
Chapter 52 Enga anie 2, 2021
Chapter 51 Enga anie 2, 2021
Chapter 48 Enga anie 2, 2021
Chapter 47 Enga anie 2, 2021
Chapter 46 Enga anie 2, 2021
Chapter 45 Enga anie 2, 2021
Chapter 44 Enga anie 2, 2021
Chapter 43 Enga anie 2, 2021
Chapter 42 Enga anie 2, 2021
Chapter 41 Enga anie 2, 2021
Chapter 40 Enga anie 2, 2021
Chapter 39 Enga anie 2, 2021
Chapter 38 Enga anie 2, 2021
Chapter 37 Enga anie 2, 2021
Chapter 36 Enga anie 2, 2021
Chapter 35 Enga anie 2, 2021
Chapter 34 Enga anie 2, 2021
Chapter 33 Enga anie 2, 2021
Chapter 32 Enga anie 2, 2021
Chapter 31 Enga anie 2, 2021
Chapter 30 Enga anie 2, 2021
Chapter 29 Enga anie 2, 2021
Chapter 28 Enga anie 2, 2021
Chapter 27 Enga anie 2, 2021
Chapter 26 Enga anie 2, 2021
Chapter 25 Enga anie 2, 2021
Chapter 24 Enga anie 2, 2021
Chapter 23 Enga anie 2, 2021
Chapter 22 Enga anie 2, 2021
Chapter 21 Enga anie 2, 2021
Chapter 20 Enga anie 2, 2021
Chapter 19 Enga anie 2, 2021
Chapter 18 Enga anie 2, 2021
Chapter 17 Enga anie 2, 2021
Chapter 16 Enga anie 2, 2021
Chapter 15 Enga anie 2, 2021
Chapter 14 Enga anie 2, 2021
Chapter 13 Enga anie 2, 2021
Chapter 12 Enga anie 2, 2021
Chapter 11 Enga anie 2, 2021
Chapter 10 Enga anie 2, 2021
Chapter 9 Enga anie 2, 2021
Chapter 8 Enga anie 2, 2021
Chapter 7 Enga anie 2, 2021
Chapter 6 Enga anie 2, 2021
Chapter 5 Enga anie 2, 2021
Chapter 4 Enga anie 2, 2021
Chapter 3 Enga anie 2, 2021
Chapter 2 Enga anie 2, 2021
Chapter 1 Enga anie 2, 2021
Vonoy ny villainess
Ilay malalan'ny devoly